ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား - ဝီကီပီးဒီးယား
ကျိုက်ထီးရိုး သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့အနီး ပေါင်းလောင်းတောင်ပေါ်တွင် ရှိသော စေတီဖြစ်သည်။
17°28′54″N 97°05′53″E﻿ / ﻿17.481682°N 97.098118°E﻿ / 17.481682; 97.098118ကိုဩဒိနိတ်: 17°28′54″N 97°05′53″E﻿ / ﻿17.481682°N 97.098118°E﻿ / 17.481682; 97.098118
၁၅ m (၄၉ ft)
၁,၁၀၀ m (၃,၆၀၉ ft)
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသော ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်
၁ စေတီတော် တည်ထားပုံ
ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်သည် အရှေ့ရိုးမတောင်တန်း အပါအဝင်ဖြစ်သော ပေါင်းလောင်းတောင်ပေါ်တွင် တည်ရှိ၍မြန်မာနိုင်ငံတွင် တန်ခိုးကြီးသော စေတီတစ်ဆူဖြစ်သည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီကို အစွဲပြု၍ စေတီတော်တည်ရှိရာတောင်ကို ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ဟုခေါ်ကြသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တည်ရှိရာတောင်ထွဋ်မှာ ပင်လယ်ပြင်ရေအမြင့်ပေ ၃၆၁၅ပေမြင့်သည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် တည်နေပုံမှာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ကြီးမား၍ မတ်စောက်သော ကျောက်ဆောင်တစ်ခု၏ အစွန်းတွင် လုံးပတ်ပေ ၅၀ ခန့်ရှိသော ဦးခေါင်းပုံသဏ္ဌာန် ကျောက်လုံးကြီးတစ်ခုက ပြုတ်လုတည်းကားတင်၍ နေသည်။ ထိုကျောက်တုံးကြီးပေါ်တွင်မှ ဉာဏ်တော် ၁၅ပေခန့် မြင့်သော စေတီတော် တည်ထားသည်။ စေတီတော် တည်ရှိရာ ကျောက်ဆောင်နှင့် ရင်ပြင်တော်ကို ချောက်တစ်ခုခြားနေသောကြောင့် သံတံတားငယ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားရသည်။ စေတီတော်တည်ထားရာ ကျောက်တုံးကြီးသည် လူတစ်ယောက် တွန်းရုံမျှဖြင့် လှုပ်ရှား၏။ ထိုကျောက်တုံးကို တွန်း၍ အောက်ခံကျောက်အကြားသို့ အပ်ချည်ကြိုးကို သွင်းပြီးလျှင် ဆွဲယူနိုင်သည်။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသမိုင်းမှာ မူအမျိုးမျိုး ကွဲလျက်ရှိသည်။ စစ်ကဲကြီး ဦးရွှေနော် ရေးသားသော မွန်ရာဇဝင်နှင့် စေတီတော် သမိုင်းပေါင်းချုပ်အရ ဖော်ပြပေးပါမည်။
မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁⁠၁၁ ခုနှစ် ဆောင်းဥတုတွင် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိသထုံပြည်သို့ ကြွချီတော်မူခဲ့ရာ၊ သထုံဘုရင် တိဿဓမ္မ သီဟရာဇာမင်းနှင့် မှူးမတ်ပြည်သူအပေါင်းတို့က စံကျောင်းတော်မဏ္ဍပ်ကြီးကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုမင်္ဂလာမဏ္ဍပ်တော်၌ ၇ ရက်တိုင်တိုင် စံနေတော်မူစဉ် များစွာသော ဝေနေယျသတ္တဝါတို့အား တရားတော် အမြိုက်ဆေး တိုက်ကျွေးတော်မူသည်။ ထိုအခါ ဂစ္ဆဂိရိ တောင်က တိဿကုမာရ ရသေ့၊ ဗန္ဓဝဂိရိ တောင်က သီဟကုမာရ ရသေ့၊ ကုသိနာရုံတောင်က ရသေ့၊ ဒိုးကမော့ခတွံဂလိုင်းတောင်က ဗုဒ္ဓဏရသေ့၊ ဒိုးခလွန်တောင်က ရသေ့၊ မဲလံတောင်က ရသေ့၊ ပေါင်း ရသေ့ ၆ ပါးတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား ဖူးမြော်ကန်တော့ကြပြီးနောက် ဓာတ်တော် မွေတော်များ ချီးမြှင့်မစရန်၊ လျှောက်ထားတောင်းပန်ကြသဖြင့် ရသေ့တစ်ပါးလျှင် ဆံတော်တစ်ဆူစီ ပေးသနားတော်မူခဲ့လေသည်။ နောက်နေ့ရက်များမကြာမီ မွတ်လအိတောင်က ကပ္ပရသေ့၊ မွတ်လအပ်တောင်က နာဒရ ရသေ့၊ ဝါဂရုနယ် လမိုင်း ကေလာသ တောင်က ရသေ့၊ ကျိုက္ကမီတောင်က ရသေ့၊ ကော့ယက္ခဇုပ်သွတ် ကျွန်းက ဘီလူးညီနောင် ၂ ယောက်၊ ဒိုးယွန်းတောင်က ရသေ့၊ ဆောင်ခဲတောင်က အလ္လကပ္ပရသေ့၊ ပေါင်းပုဂ္ဂိုလ် ၇ ဦးတို့ အဖူးအမြော်ရောက်ကြသဖြင့် အထက်ကနည်းတူ ဆံတော်တစ်ဆူစီ ပေးသနားတော်မူခဲ့သည်။ တိဿဓမ္မသီဟရာဇာမင်းအားလည်း ဆံတော် ၂ ဆူ ချီးမြှင့် ပေးသနားတော်မူခဲ့လေသည်။ ဒိုးကမော့ခလွံဂလိုင်းတောင်က ဗုဒ္ဓဉာဏရသေ့၊ ဒိုးခလွန်တောင်က ရသေ့နှင့် ကုသိနာရုံတောင်က ရသေ့တို့သည် မိမိတို့ရရှိထားသော ဆံတော်ဓာတ်များကို ဌာပနာခြင်းမပြုကြပဲ သိမ်းဆည်းထားကြသည်။ ကာလအတန်ကြာလတ်သော် ဒိုးခလွန်ရသေ့နှင့် ကုသိနာရုံရသေ့တို့မှာ အိုမင်းမစွမ်းရှိကြသည့်အပြင် အာနရောဂါစွဲကပ်လာသည်နှင့် မကွယ်လွန်မီ မိမိတို့ရရှိထားသော ဆံတော်များကို ဗုဒ္ဓါဏရသေ့အား ပေးအပ်ခဲ့လေသည်။ ဗုဒ္ဓါဏရသေ့သည် ဆံတော်ဓာတ် ၃ ဆူကို မပျောက်မပျက်ရအောင် မိမိ၏ ဆံကျစ်အတွင်း၌ စည်းနှောင်ထားလေ၏။ နောင်နှစ်ကာလ အတန်ကြာလတ်သော် အနာရောဂါနှိပ်စက်သဖြင့် ရသေ့ကြီးသည် အကယ်၍ မိမိကွယ်လွန်သွားခဲ့သော် ဆံတော်ဓာတ် ၃ ဆူကို မည်သို့ မည်ပုံထားခဲ့ရမည်နည်းဟု တွေးတောပူပန်ခြင်း ဖြစ်မိလေသည်။ ထိုအခါ သိကြားမင်းသည် လူ့ပြည်ဆင်း၍ ရသေ့ကြီး၏ ဆန္ဒအတိုင်း ရသေ့ကြီးဦးခေါင်းနှင့် တူသော ကျောက်တုံးကို ရှာဖွေကာ ကျောက်တုံးထဲကို သန်လျက်နှင့် ထွင်း၍ ဆံတော်တစ်ဆူကို ဌာပနာခဲ့လေသည်။မွန်လူမျိုးတို့ တည်ထားကိုယ်ကွယ်ခဲ့သည် ထိုသို့ ကျောက်တုံးပေါ်တွင် တည်ထားခဲ့သော စေတီတော်ကို မွန်ဘာသာဖြင့် ကျိုက်ဣသိယို၊ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရသေ့ဦးခေါင်း ဘုရားဟုခေါ်၏။ နောင်ကာလကြာလတ်သော် ကျိုက်ဣသိရိုးမှ ကျိုက်ထီးရိုးဟု စကားရွေ့လျောလာလေသည်။ ကျန်ဆံတော် ၂ ဆူကိုလည်း သိကြားမင်းက ဒိုးခလွန်တောင်နှင့် ကုသိနာရုံတောင်များတွင် အသီးသီးဌာပနာပေးခဲ့ကြောင်းကို သမိုင်းများတွင် ဆိုသည်။ ထိုစေတီတော်များမှာ ကေလာသနှင့် ကုသိနာရုံဟု ထင်ရှားသည်။
ကျိုက်ထီးရို ရင်ပြင်တော်မှ မြင်ရသော ရှုမျှော်ခင်းမှာ အလွန်သာယာသည်။ အနောက်ဘက်သို့ မျှော်ကြည့်လျှင် စစ်တောင်းမြစ်ကို ကျော်လွန်၍ ပဲခူးရွှေမော်ဓော စေတီတော်ကို ဖူးမြင်နိုင်သည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်သို့ တက်ရန် လမ်း ၂ သွယ် ရှိသည်။ တစ်သွယ်မှာ စစ်တောင်းရွာမှ တက်ရသော လမ်းဖြစ်၍ ကျန်တစ်သွယ်မှာ ကျိုက်ထိုမြို့မှ မော်တော်ကားဖြင့် ၉မိုင်ခန့် ဝေးသော ကင်မွန်းစခန်းမှ တက်ရသော လမ်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယလမ်းမှာ ယနေ့ခေတ် ဘုရားဖူးများ အသုံးပြုသော လမ်းဖြစ်သည်။ ကင်မွန်းစခန်းမှ ကျိုက်ထီးရိုးရင်ပြင်တော်အထိ ၇ မိုင်ခွဲခန့်ရှိ၍ စခန်းပေါင်း၂၇ စခန်းကို ဖြတ်ကျော်သွားရသည်။ ယခုအခါ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်သို့ လာရောက်ရန်မှာ ရထားလမ်း၊ ကားလမ်းများရှိနေပြီ ဖြစ်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ တောင်တက်ရန်အတွက် စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုခြင်းကတစ်ကြောင်း စသည်တို့ကြောင့် လူပရိတ်သတ်မှာ ယခင်ထက်ပင် စည်ကားလေသည်။
ဘယ်ဖက် - ၁၉၀၀ ခုနှစ်က ရိုက်ကူးထားသော ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင် စေတီတော်မြတ်။ ညာဖက် - စေတီတော်အား ညအချိန် ဖူးမြှော်ရပုံ-၂၀⁠၀၇ ခုနှစ်
နံနက်ပိုင်းချိန် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်နှင့် တောင်ပေါ်မြင်ကွင်း
ရိုးအီမသွားနိုင်ဘဲ ညနေစောင်းချိန် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြင်ကွင်း
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပွဲတော်ကိုကျင်းပချိန်မှာ နှစ်စဉ် တပို့တွဲလမှ တန်ခူးလအထိဖြစ်သည်။ ပွဲတော်အချိန်၌ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ ထောင်သောင်းမကသော ဘုရားဖူးများ လာရောက်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် နိုင်ငံတစ်ကာမှ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များပါ လာရောက်ကြသဖြင့် ယခင်ကထက် များစွာစည်ကားလေသည်။ ဘုရားသို့ တက်ရာလမ်းတစ်လျောက်တွင် ဘုရားဖူးများနားနေ တည်းခိုရန်အတွက် ရေမြောင်လေး၊ ရွှေရင်ဆို့၊ ကင်ပြွမ်းပင်၊ ရေမြောင်ကြီး၊ ဘိုးပြန်တောင်၊ စိုင်တစ်မော့အစရှိသော စခန်းများ၌ ဈေးဆိုင်ကန္နားများ ရှိလေသည်။ ကင်မွန်းစခန်း ၌ ဘိုး⁠ဘိုးကြီးနတ်နှင့် ဟုံးနတ်စင်များရှိ၍ လမ်းခရီးတွင် မျှော်တော်ယောင်စေတီ၊ လွမ်းစေတီ၊ ကျောက်သမ္ဗာန် စသော စေတီငယ်များနှင့် ရွှေနန်းကျင်နတ်၊ ပန်းတင်နတ် စသော နတ်ကွန်းများကို တွေ့နိုင်ပေသည်။ ဘုရားဖူးများသည် နေ⁠နေနားနား တက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများနှင့် အိုမင်းမစွမ်းသူများတို့သည် အထမ်းပုခက်များစီး၍ တက်လေ့ရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်မူ တောင်တက်ကားများဖြင့် နေ့ချင်းပြန် သွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်ကြပေပြီးဖြစ်သည်။ ဘုရားဖူးများသည် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားမှ တစ်ဆင့် မုဆိုးဘုရား၊ ဖားဘုရား၊ ငါးဘုရား၊ နဂါးဘုရားများကို ဖြတ်၍ ၄ မိုင်ခန့်ဝေးသော ကျောက်ထပ်ကြီးဘုရားသို့လည်း သွားရောက်ဖူးမြှော် ဆုတောင်းလေ့ရှိကြသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ရင်ပြင်တော်ပေါ်ရှိ ဘိုး⁠ဘိုးကြီး နတ်ရုပ်နှင့် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား မြောက်ဘက်ရှိ ကျီးကန်းပါးစပ်ခေါ် ကျောက်ဂူနေရာတို့မှာ ဘုရားဖူးများ ဆုတောင်း အဓိဌာန်ပြု၍ အမွှေးနံ့သာ ပက်ဖြန်းခြင်း၊ ပိုက်ဆံပစ်ထည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်သော နေရာဖြစ်သည်။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားမှတဆင့်ရသေ့တောင်၊ စမတောင်၊ ဝိဇ္ဇတောင် ရေတံခွန်များသို့ ကားလမ်းဖောက်လုပ်ပြီးစီး၍ကားဖြစ်အလွယ်တကူလှည့်လည်သွားရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ 
ကင်မွန်းစခန်းမှ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသို့ ခြေလျင်တက်မည်ဆိုပါက စခန်းပေါင်း ၃၇ ခုကို ဖြတ်သန်းသွားရသည်။ ခရီးအရှည်မှာ ၇ မိုင်ခွဲခန့် ရှိသည်။ ကင်မွန်းစခန်းမှ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားအထိ ခြေလျင်တက်မည်ဆိုပါက ပုံမှန်တက်နိုင်သူများအတွက် သုံးနာရီ သို့မဟုတ် လေးနာရီခန့် ကြာမြင့်သည်။ အေးအေးဆေးဆေး နားရင်းသွားရင်းလုပ်မည်ဆိုပါက ထို့ထက်မက ကြာမြင့်သည်။ စခန်းများကို အစဉ်လိုက် ရေတွက်ပါက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
၆။ မရမ်းတောင်စခန်း (ဤအထိ ခရီးတစ်မိုင် ရှိသည်)
၁၃။ ဂွေးပင်စခန်း (ကျားဆွဲစခန်းဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဤအထိ ခရီးနှစ်မိုင်ရှိသည်။)
၁၈။ ပန်းမတောင်စခန်း (ဤအထိ ခရီးသုံးမိုင် ရှိသည်)
၂၄။ ဘန့်ဘွေးပင်စခန်း (ဤအထိ ခရီးလေးမိုင် ရှိသည်)
၂၆။ အောက်စိုင်တမော့စခန်း (ဤအထိ ခရီးငါးမိုင် ရှိသည်)
၂၉။ စခန်းလေးစခန်း (ဤအထိ ခရီးခြောက်မိုင် ရှိသည်)
၃၂။ လွမ်းစေတီ၊ မြစေတီ
၃၃။ ရွှေရင်အေးစခန်း (ဤအထိ ခရီးခုနစ်မိုင် ရှိသည်)
၃၇။ ကျိုက္ကသီယို (ခေါ် ) ကျိုက်ထီးရိုးရင်ပြင်တော်
ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ နေ့ဘက်မြင်ကွင်း
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ၏ အံ့ဩဖွယ် ဟန်ချက်
↑ HugeDomains.com - AllMyanmar.com is for sale (All Myanmar)
↑ Kyaikhtiyo - The Golden Rock Stupa presented in Travelling section
↑ မောင်စိုးထိုက် (သုံးဆယ်) (မေလ၊၂၀၁၅ ခုနှစ်). ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ကြီး - သမိုင်းစုံ၊ အံ့ဖွယ်ရာများနှင့် ဗုဒ္ဓ၊ ဓမ္မ သံဃ ပူဇာ. ၃၇၇၊ လှော်ကားလမ်း၊ (၅၄) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်မြို့: အမေ့သားထိုက်စာပေ၊။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား&oldid=537033" မှ ရယူရန်
၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။